Ukuphupha umabonwakude Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Akukho mntu unokucinga namhlanje ukuba kwabakho ubomi ngaphandle komabonakude, kuba yinxalenye yamakhaya phantse onke. Kwii-1950s zokuqala, kuphela ngabantu abangama-300 eJamani ababenomabonwakude.
Kwiminyaka elishumi kamva babesele bengaphezulu kwezigidi ezintathu ababenomdla ngale ndlela intsha kwaye bahlala benomdla phambi kwezikrini. Apho ngaphambili ubunokulandela kuphela iminyhadala yehlabathi ngonomathotholo, ngequbuliso waba nethuba lokumamela, kunye nokubona okwenzekayo kwi el mundo kwimifanekiso eshukumayo.
Lunxibelelana njani uphando lwamaphupha kunye nesimboli yamaphupha "umabonwakude"? Fumana apha ngezantsi malunga namaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli kunye nokutolika okwahlukileyo kwephupha lakho likamabonwakude:
1 Uphawu lwephupha «TV» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Ndiphupha umabonwakude. Ngaba ikhona into kumabonwakude?
1.2 Ukuthenga umabonwakude ephupheni: 3, 2, 1 - yeyam!
1.3 Iphupha kumabonakude: yintoni engalunganga ngaye?
1.3.1 Namhlanje umabonwakude wamaphupha ucinyiwe, umabonwakude wophukile
1.3.2 Inkqubo eshushu entle-xa umabonwakude esephupheni
1.3.3 Umabonwakude awucinywanga kwilizwe lamaphupha. Kodwa kutheni?
1.4 Umabonwakude omdala? Nantsi ingcaciso efanelekileyo yamaphupha!
1.5 Isikrini sikamabonwakude: Uhlalutyo lomfanekiso wephupha
2 Uphawu lwephupha «umabonwakude» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «umabonwakude» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «umabonwakude» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «TV» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Ndiphupha umabonwakude. Ngaba ikhona into kumabonwakude?
Ukuba umntu uphupha ngokubukela umabonwakude, kusengqiqweni ukunikela ingqalelo kuwo wonke umxholo wephupha. Ukuba ubunemvakalelo elungileyo ngelixa ubukele umabonwakude, kufuneka ulumke ungaphulukani nokunxibelelana nenyani. Ukuba iimvakalelo zazingalunganga, kufanele ukuba iqondwe njengefowuni yokumamela ngakumbi kwilizwi lakho langaphakathi kwaye ungaphenjelelwa ngabanye.
Ukuthenga umabonwakude ephupheni: 3, 2, 1 - yeyam!
Ukuba umntu ophuphayo uthenga umabonwakude ngelixa elele, umnqweno ongazi nto wokubalekela kwelinye ilizwe unokuzimela emva kwakhe. Kukho ithuba lokuba kwihlabathi lokwenyani umphuphi azive ekhathazekile kwaye iingxaki ezahlukeneyo ziya kuphuma kulawulo. Ixesha lifikile mhlawumbi xa kufuneka uthathe ixesha lokuphumla kunye nokuphumla.
Iphupha kumabonakude: yintoni engalunganga ngaye?
Namhlanje umabonwakude wamaphupha ucinyiwe, umabonwakude wophukile
Umnyhadala wephupha apho umabonwakude waphulwa unokuchazwa ngokuqinisekileyo. Ngokukodwa ngokubhekisele kutoliko lwengqondo lwamaphupha, ngasemva komfanekiso wephupha kukho inkxalabo enkulu esebenzayo kubomi bomntu, kodwa kunye nokuvuleleka okuvulekileyo kwabanye abantu kunye nezinye izinto ezinokuthi zityebise ukucinga komntu.
Inkqubo eshushu entle-xa umabonwakude esephupheni
Isilumkiso siyacetyiswa xa ubukele umabonakude etsha kwilizwe lamaphupha. Iphupha lisinika ukuba siqonde ukuba kufuneka siphaphile kwaye senze ngabom ngalo mzuzu. Mhlawumbi sinezicwangciso ezithile okwangoku zokuba ukungxama kunye nokungxama kungasibeka emngciphekweni. Apha kubalulekile ukuba ube sengqiqweni kwaye ungakhohliswa yimibono.
Umabonwakude awucinywanga kwilizwe lamaphupha. Kodwa kutheni?
Ngaba umabonwakude akazange acime kumaphupha akho? Ukuba kunjalo, oku kunokuchazwa ngeendlela ezimbini. Enye into, uya kuba nakho ukumelana noxinzelelo lwemihla ngemihla ngenxa yokuphazamiseka ekujoliswe kuko. Kwelinye icala, kunokwenzeka ukuba uzive ungonwabanga kwindima ethile kwihlabathi elivukayo kwaye ufuna ukubaleka kuyo, kodwa okwangoku awunayo amandla ukuyenza
Umabonwakude omdala? Nantsi ingcaciso efanelekileyo yamaphupha!
Umabonwakude wakudala ephupheni umele amaxesha adlulileyo, xa kunokwenzeka ukuba umntu wayeziva elilolo kwaye engathathi nxaxheba kubomi boluntu nabanye abantu. Isimboli yamaphupha kumabonwakude wakudala ngoku ibonisa oleleyo ukuba la mava sele enziwe kwaye ulindelwe likamva eliqinisekileyo.
Isikrini sikamabonwakude: Uhlalutyo lomfanekiso wephupha
Nabani na obukela isikrini sikamabonwakude kumaphupha abo kufuneka akuqonde oku njengophawu lokuba kufuneka baxhomekeke ngakumbi kwimpembelelo nakuthuku. Kwilizwe elivukayo, kukho amaxesha amaninzi apho ithuku linokukunceda wenze isigqibo esifanelekileyo, kwanaxa kunzima.
Uphawu lwephupha «umabonwakude» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uzibona ubukele umabonwakude ephupheni, kuya kuxhomekeka ekubeni injani kanye imeko yephupha. Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, uphawu lwephupha "umabonwakude" nalo lisoloko liphakamisa umbuzo wento ozimisele ukuyibona ephupheni, okanye uzimisele kangakanani ukujonga okwenyani emehlweni.
Umabonwakude yindlela eyaziwayo yokuhlamba kunye nokuziphazamisa kubomi bemihla ngemihla eneengxaki zayo ezininzi. Mhlawumbi, kumdlalo bhanyabhanya weTV, udlala indima ebomini bakho? Okanye ngaba ungumbukeli ongathethiyo ekufuneka kuqala aqokelele iinyani ukuze azive ekhuselekile?
Ukusuka kwimbono yophando ngephupha, umntu unokubanjiswa kakhulu kwihlabathi lamaphupha aze anikezele. Ulahlekiso phantsi. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba ubuhleli phambi kweTV kumava akho ephupha kwaye ukhululekile ngayo. Ukuba okuchaseneyo kunjalo kwaye uhlala phambi kweTV unemvakalelo embi, kuya kufuneka uyithembe intuition yakho kubomi bokwenyani ngakumbi kwaye ungazivumeli ukuba uphenjelelwe ngabanye abantu.
Ukuba iphupha lifana inkwenkwezi ngokwakhe, mhlawumbi nkqu neHollywood okanye iSimpsons, kumabonwakude, imbonakalo yakhe inokumthabathela kwinqanaba elinokuba sesichengeni sakhe. Kanye njengokuba umabonwakude uhlala esibonisa umhlaba ogqibeleleyo nonobuhle apho sithanda khona ukuntywilisela, naku kokwethu. ubukhuluMalunga nokuba ngabaphuphi mabacinge ntoni kube kanye.
Nabani na odlala kumabonwakude ngekhonsoli yomdlalo ephupheni lakhe kufuneka acinge ngesimo sakhe sengqondo kwinyani. Kungenxa yokuba ungafuna ngaphezulu okanye ngaphantsi ukuba ubaleke kuyo. Ukuba uphupha ubhalela umabonwakude njengentatheli, ungathanda ukuhambisa ulwazi oluthile kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «umabonwakude» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umntu uxakeke kakhulu ngumabonwakude kwilizwe lamaphupha, oku kunokuba, ngokokuchazwa kwengqondo ephupheni, kungabonakalisa ukuba akathabathi nxaxheba kubomi bokwenene kuba ukungenzi ithande. Ukuphupha okunokwenzeka kukwaxakeke kakhulu kuwe kwaye ke uyabajongela abantu kunye nezinto ezinokubenza bucebise ubomi bakho.
Ukusebenza nomabonwakude kungacinezela imvakalelo yokuba wedwa, ngakumbi ukuba lo mntu kuthethwa ngaye wayehleli yedwa phambi kwebhokisi eqhafazayo. Ukufana kunokuhlala kuthathwa apha kunye nehlabathi elivukayo. Ukongeza, umntu ophuphayo kufuneka azibuze ukuba bunjani ubomi bakhe ngokwentlalo. Ukuba umntu uthanda ukuba yedwa kwaye hlala kude kunxibelelwano Okanye ngaba luloyiko olwenza ukuba kube nzima ukunxibelelana nabanye abantu?
Ukuba umfanekiso wephupha «umabonwakude» uboniswa ngohlobo lwabaphulaphuli abonwabisayo, kunokugqitywa endaweni yokuba xa uphupha uthanda ukuba phakathi kwabantu kwaye ungakonwabela ukuba kunye nabanye. Kodwa apha kuyacetyiswa ukuba ukutolikwa kukhunjulwe ezakho iimvakalelo ngexesha lephupha.
Uphawu lwephupha «umabonwakude» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kuyabona umfanekiso wephupha "umabonwakude" njengemfuneko yokuqina Ukuzazisa yokuphupha. Uvumela kude kangakanani ukukhula kwakho ngokomoya kwaye ucinga ukuba ubeka phi imida?
Uphuhliso lwengqondo yinkqubo enganyanzelekanga ukuba ilandele ishedyuli, kuba umntu ngamnye uhamba ngokwamanqanaba akhe okufunda kunye nophuhliso. Endleleni yokwandisa ukuqonda, amaxesha okuthula ahlala efuneka. Ukuba ubandakanyeka koku, ukuthula kungasikhokelela kwimibono emitsha ngokupheleleyo kwaye kuphucule ulwazi lwethu lweenkqubo zangaphakathi.